အိုးဝေ: October 2007
ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ(၃၁)ရက်… ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း မောင်ဖြူရဲ့မွေးနေ့ပေါ့ဗျာ။
မွေနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးရမယ်ဆိုတော့... ဘာဆုတောင်းပေးရမလဲ။
အင်း… အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့မဟုတ်လား။
ဒီတော့ … ယနေ့မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ့နှစ်ဆယ်တိုင်အောင် ဘ၀တစ်ရှောက်လုံး ကျန်းကျန်းမာမာ၊ ချမ်းချမ်းသာသာ၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ မိမိလိုရာရည်မှန်းချက်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျား။
ပြီးတော့ တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီးဘ၀ကနေ အမြန်ဆုံး ကျွတ်လွတ်ပါစေဗျား။ ဒါကတော့ ဆုတောင်းပေးလို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူး… ကိုယ်တိုင်လုံ့လစိုက်မှဖြစ်မှာ။ အဲဒီတော့ … နောက်သီတင်းကျွတ်မတိုင်မီ မိမိချစ်သောသူနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ပြီး ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတယ်ဗျား။ သူငယ်ချင်း မောင်ဖြူ သက်ကျော်ရာကျော် ရှည်စေသော်…
နေကောင်းကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ၍၊ လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်ကြွယ်ဝပါစေ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်(ဇနိနှင့်ဇန်ိ၏သူမ)က ကိုမောင်ဖြူရဲ့ အလိုအပ်ဆုံးတွေထဲက အလိုအပ်ဆုံးတွေ ပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Posted by tmn at 3:22 AM Links to this post6comments
ကလေးဘ၀ကတည်းက စသိခဲ့တာ မင့်အပေါ်ငါ့အချစ်၊
ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် တို့နှစ်ယောက်ဟာ နေ့တိုင်းအတူ
ငယ်စဉ်ကတည်းက တို့နှစ်ယောက်ဘ၀တွေက အမြဲအတူတူ၊
ကျစ်ဆံမှီးနဲ့ မင့်ပုံရိပ်ဟာ အလွန်တရာအပြစ်ကင်း
သွားကြိုးလေးနဲ့ မင်းရဲ့အပြုံးဟာ ဖြူစင်ရိုးရှင်း၊
ကွင်းပြင်ထဲမှာ အတူတူကစားရင်း တို့တတွေပြေးလွှား
ကောင်းမလေးရေ မင်းအမြဲပြောတာ Friend Forever…
ဂျီကျတဲ့အခါ မင်းကငါ့အပေါ် ဒေါသတွေထွက်
ငါပြန်ချော့လို့ ကျေနပ်တဲ့အခါ အမြဲပြုံးနေခဲ့၊
ညစဉ် အိပ်မက် မက်နေတတ်တာ မင်းရဲ့အကြောင်း
အိပ်မက်ထဲမှာ မင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေက လုံးဝမဟောင်း၊
ဒီလိုနဲ့ပဲ နေ့ရက်များစွာ ကျော်လွန်ဖြတ်ခဲ့
ငါ့ရင်ထဲက အချစ်တွေကလည်း ပိုပိုများခဲ့၊
မင်းနဲ့ခဏတာ ဝေးကွာရတဲ့ အချိန်ခါတိုင်း
မင်းကိုလွမ်းလို့ ငါ့ရဲ့စိတ်တွေ အမြဲယိမ်းယိုင်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ တက္ကသိုလ်ရောက်လာ စာအတူကျက်ခါ
နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်တော့ မင်းကငါ့ကို အဖြေပေးခဲ့တာ
ပို့စကဒ်ထဲမှာ မင်းရေးလိုက်တော့ I LOVE YOU FOREVER…
ငါတို့နှစ်ယောက်က အရွယ်ရောက်တော့ ရည်းစားတွေဖြစ်
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုက ဘ၀ထဲရောက်လာ…
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်တွေလည်း ပျက်ကာသုန်းလို့
မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုက မဖြစ်ပါနဲ့အုံးလို့၊
လက်တွေ့ကြတော့ ငါဆုတောင်းတိုင်း မပြည့်စုံနိုင်ပါ
ဘာဖြစ်လို့များ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ မင်းကတွဲသွား
ဒီမြင်ကွင်းမျိုး ငါ့မျက်လုံးက မျက်ရည်မခိုင်မာ၊
ငယ်ငယ်တုန်းက ထားရှိခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်များ
အခုအချိန်မှာတော့ အားလုံးဟာ ပျောက်ပျက်လို့သွား၊
ငါ့ရင်ထဲမှာ မေးနေမိတာ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ
လောကကြီးကို မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး ပြောင်းလဲမှုများ၊
ဆိုးဝါးမှုတွေ များလွန်းတဲ့အခါ ငါ့ထွက်ပြေးသွား
အဝေးဆုံးရောက်မှ သတိရမိတာ အတိတ်ကအဖြစ်များ။
စချစ်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေက MTU မှာ
2002 နှစ်ဦးအစ မမေ့နိုင်တော့ပါ၊
မင်းပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းက အမြဲသူငယ်ချင်းကွာ
နှလုံးသားကို နာကြင်စေတာ ဒီစကားကြားမှ။
ပြန်စဉ်းစားရင် ဒီအကြောင်းတွေ မနေ့တစ်နေ့ကလို
စုပ်ပြတ်သွားတဲ့ နေ့တွေလည်း အသိစိတ်ကမို့၊
လောက်ကျွမ်းနေတဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခုကို မင်းကအပြစ်ဆို
မင်းဖြတ်ခဲ့တဲ့ သစ္စာတရားက ၀ိုင်တစ်ခွက်လို၊
မင်းပေးခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်က မီးတောက်တစ်ခုလား…
လောက်ကျွမ်းသူ ငါပါပဲ… မင်းကိုချစ်တာ အပြစ်တစ်ခုဖြစ်မလား၊
သူကပဲ ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတာ မင်းရဲ့အပြစ်လား
ဒါမှမဟုတ်… ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်အတူချစ်ခဲ့ကြတာ အပြစ်တစ်ခုဖြစ်မလား။
Posted by tmn at 11:53 PM Links to this post0comments
Posted by ဇနိ at 6:59 PM Links to this post2comments
ကျွန်တော်၏ ဆရာဆိုလည်းဟုတ်၊ အပေါင်းအသင်းဆိုလည်း မှန်သော အကိုကြီးများသည် အခုသီတင်းကျွတ်နှင့်အတူ သူတို့၏ လူပျိုသိုးဘ၀ကြီးများကိုစွန့်လွှတ်ရန် စိတ်ထဲတွင် အစီအစဉ်များဆွဲ၍တစ်ဖုံ၊ ဟိုခန်းမ၊ဒီခန်းမကိုလူကိုယ်တိုင်သွား၍တစ်လှည့် စုံစမ်းမေးမြန်းကာ အိုမင်းရန်အတွက် အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားနေလေတော့သည်။
သူတို့တွေ ယင်းသို့ကြိုးစားနေသည်ကို သိရ၊ကြားရသောအခါ ကျွန်တော်သည်လည်း စိတ်ထဲတွင် မရိုးမရွ ကြွတတဖြစ်ကာ အလွန်ကို အိုချင်မင်းချင်စိတ်တွေသာ ပေါ်နေလေတော့သည်။ ပြောလို့သာပြောရသည် ကျွန်တော်သည်လည်း အသက်အရွယ်ငယ်လှသောသူတော့မဟုတ်ပေ။ သီးချိန်တန်သီး၊ ပွင့်ချိန်တန်ပွင့် ဆိုသည့်စကား ရှိသော်ငြား၊ တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်တော်မှာ အချစ်ပန်းလေးတစ်ပွင့် ပွင့်ထားသော်လည်း ယခုအခါတွင် အချိန်သင့်နေသော်လည်း သီးရန်ကားမစွမ်းသာသေးပါချေ။ ထိုသောအခါ ပွင့်ပြီးသီးရန်ကြိုးစားနေသော ကျွန်တော့်အကိုကြီးများ၏ အသက်အရွယ်ကိုခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပေသည်။ သူတို့များ အိုချင်နေသည်မှာကား၊ အသက်အရွယ်ကို ပြောလိုခြင်းမဟုတ်တော့ပေ။
ကျွန်တော်ချစ်သူသက်ထား စ၍ရစဉ်က ကျွန်တော်၏ငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို စားရေးကာ ခနဲ့တဲ့တဲ့စာတစ်စောင်ရေးပေးဖူး၏။ တကယ်တမ်းကျတော့ မနာလို၍ စကားနာထိုးခြင်းဖြစ်လေသည်။ - ဟေ့ ကောင်ကြီး မင်းကတော့ အတော့်ကို ကံနိမ့်နေရှာပြီ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ကံနိမ့်လာပြီဆိုရင် မိန်းကလေးတွေကို စပြီး အသည်းအသန်စိတ်ဝင်စားလာတာ။ ဒီထက်ကို ကံဇာတာနိမ့်ကျလာရင် ချစ်သူရည်းစားဘ၀ကို ခုန်ကူးချင်စိတ်တွေပေါ်လာတာပဲကွ။ မိဘကျေးဇူးကို မဆပ်နိုင်သေးခင်မှာ အဲဒီစိတ်တွေပေါ်လာတာဆိုရင် အတော်ဆိုးနေပြီ။ မင်းက ကြွေးမြီဟောင်းကို မဆပ်နိုင်သေးခင်မှာ၊ ကြွေးသစ်ချဖို့ကြိုးစားတာ အောင်မြင်ဖို့လမ်းစရနေပြီ။ မင်းရဲ့ကံက အတော်ကို နိမ့်နေပြီ။ ငါကတော့ ကံအတော်မြင့်နေတယ်ကွ။ ငါကိုယ်တိုင်က ဘယ်လောက်ပဲ ကံနိမ့်အောင် ကြိုးစားစေကာမှု ဘယ်မိန်းကလေးကမှ ငါကို ကံနိမ့်ခွင့်မပေးသေးဘူးကွ။ မိဘကို လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးခွင့်ရတာပေါ့ကွာ။ - ၅နှစ်ခန့် မတွေ့ရသော ယင်းသူငယ်ချင်းကို ကျွန်တော် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့သောအခါ သူသည်လည်း ကံနိမ့်စေရန် အတော်ကြိုးစားနေရဆဲဖြစ်လေသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ချစ်ရေးဆိုထားသောမိန်းကလေးမှ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအား ငရုတ်ပင်လေးပေးကာ ရှင်သန်ကြီးထွားအောင် အစိုက်ခိုင်းလေသည်။ အကယ်၍ ငရုတ်ပင်သည် ခြောက်ကပ်ကာ အသက်မရှင်ပါက သူမအားမချစ်၍ ဂရုမစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်ပြောသဖြင့်တစ်ညလောက် ကျွန်တော်ထံမှာအိပ်ရန်ပြောသော်လည်း မည်သို့မျှ တားမရချေ။ ငရုတ်ပင်အား နေသာသည့်ဖက်တွင် နေပြရန်နှင့် ရေလောင်းရန် ပြန်ပြေးလေတော့သည်။
တစ်ခါက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည် ကံမြင့်သော အခြေအနေသို့ ရုတ်ချည်းရောက်သွားသည်။ အကြောင်းမှာကား- သူ၏ကောင်မလေးမှ စိတ်ကောက်၍ မခေါ်မပြောလုပ်ကာ ဒဏ်ခတ်နေသောကာလဖြစ်လေသည်။ သို့သော် သူက- မချစ်မိလို့သေတဲ့သူမရှိဘူးကွ၊ ချစ်မိလို့အသည်းကွဲရတဲ့လူပဲရှိတာ-ဟု ဆို့ဆို့နစ်နစ်အသံကြီးဖြင့် ၀မ်းပန်းတနည်း တဖွဖွပြောသံကိုလည်း ကြားဖူးပါသည်။ ခက်လိုက်ပါဘိ ကျွန်ုပ်တို့ ပုရိသယောက်ျားအပေါင်းတို့။
တကယ်တမ်းတွင် ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘဲ လွဲနေသလား၊ နေရာတိုင်းတွင် ဤကဲ့သို့ပဲလားမသိ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထင် ပွင့်ချိန်တန်သော်လည်း မပွင့်ရဲ၊ မဖူးရဲဖြစ်နေသောသူများ ယခုကာလတွင် အလွန်ပင်များပြားလှသည် ဟုထင်ပါသည်။ အကြောင်းအရင်းစစ်ကို ရှာဖွေကြည့်လိုက်လျှင်လည်း အခြေခံအကြောင်းမှာ စီးပွားရေးအဆင်မပြေတာက စမည်ထင်၏။ သို့သော်လည်း ဤသို့သော အဆင်မပြေမှုတွေ များသည့်အထဲပင်- လူကပဲ အချိန်ကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲတာလား၊ အချိန်တွေကပဲ လူကိုပြောင်းလဲစေတာလား မသိဘူးနော်၊ ငယ်ငယ်တုန်းတော့ ရည်းစားစာပေးဖို့ တော်တော်ရှက်တာကိုးဗျ- ဆိုပြီး အရှက်တွေကို ဘေးဖယ်ကာ ကြိုးစားသဖြင့် အလွမ်းတကာ့ အလွမ်းထဲမှာ ချစ်သူကိုလွမ်းရတဲ့အလွမ်းက အင်ဖဲနတီနဲ့ ညီမယ်ထင်တယ်လို့ တဟီးဟီးဖြင့်ပြောရသော အဆင့်ကို ရောက်သူများလည်း ရောက်ကြရသည်။
အချို့သော လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးများကလည်း သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုလျှင် အိမ်အပြင်သို့ ထွက်ချင်စိတ်တွေ နည်းကုန်ကျလေသည်။ အကြောင်းမူကား လူအများက သူတို့ကိုကြည့်ကြသော မျက်လုံးများကို မကြိုက်ကြ၍ဖြစ်လေသည်။ သံသယဖြင့်ကြည့်ကြသော မျက်လုံးများကို ကြိုက်သူမရှိ၊ ယူသူမရှိလို့ မဟုတ်ဘူးဟေ့၊ မယူနိုင်သေးလို့ မယူရတာဟေ့ ဆိုတာကို မျက်လုံးဟန်ဖြင့် ဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရတာကိုက အမောပင်။
မည်သိုသော အကြောင်းရင်းတွေရှိစေကာမှု သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုလျှင်ကာ အိမ်တွင်းပုန်းသူများရှိသလို၊ မှိုရသည့် မျက်နှာဖြင့် တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်ကာ အိုရန်၊မင်းရန်ပြင်ဆင်သူများကလည်း ပြင်ဆင်နေကြလေပြီ။ ကျွန်တော်သည်လည်း ဒီတစ်ဝါကျွတ်တွင် ဘယ်သူငယ်ချင်း အပျိုကြီးများ၊လူပ်ျိုကြီးများ ကျွတ်ကြ၊လွတ်ကြသော ဘ၀ကိုရောက်ကြမလဲဆိုတာကိုသာ စဉ်းစားရင်း နောက်တစ်ဝါကျွတ်တော့ ငါ့အလှည့်ပေါ့ကွာဟု စိတ်ထဲမှာတွင် ကျုံးဝါးနေမိတော့သည်။
Posted by ဇနိ at 2:43 PM Links to this post5comments
Posted by မောင်ဖြူ at 4:39 PM Links to this post2comments
- ညက အေးလိုက်တာကွာ၊ အဘိုးအိပ်လို့တောင် မရဘူးကွာ။
- အဲဒါတော့ မသိဘူး၊ အဘိုးနဲ့သွားတွေက အတူတူမအိပ်ဘူး။
- အဘိုး ဘာ့ကြောင့် အဖေနဲ့ စိတ်ဆိုးနေတာလဲ။
- မင့်အဖေက အဘိုးဦးထုပ်တို့၊ ဖိနပ်တို့၊ အင်္ကျီတို့ကို ယူဝတ်တာတော့ အဘိုးသည်းခံနိုင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့် အဘိုးသွားကိုပါ ယူတပ်ပြီး ထမင်းစားပွဲမှာ အဘိုးကို လာရယ်ပြတာကတော့ လွန်လွန်းအားကြီးတယ်။
အစားကောင်းသော အဘိုးလာလည်နေစဉ် ကပ်စေးနှဲ လင်မယားနှစ်ယောက်သည် အဘိုးသရေစာ မစားနိုင်အောင်ဆိုပြီး အဘိုး၏ သွားတုတို့ကို ထမင်းစားချိန်များအတွင်း သိမ်းထားသော ဟူ၏။
လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းလာသော အဘိုးအိုက လေယာဉ်မှုးအား
- ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်၊ အဘိုးကို လေယာဉ်နှစ်ခါစီးခွင့်ပြုတာ။
- ဘယ်နှယ့်နှစ်ခါလဲ အဘိုးရဲ့၊ အဘိုး ကျွန်တော်တို့ လေယာဉ်နဲ့ ဒီတစ်ခါပဲ စီးလာတာ။
- ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်မို့လို့ပါကွယ်။
- အရွယ်အိုလာခြင်းကိုပြသည့် လက္ခဏာရေးငါးပါး။
၁- စားတော်ဆက်သွားသည့်အခါ စားပွဲထိုးသူငယ်မကို မကြည့်မီ ထမင်းဟင်းစာရင်းကို ကြည့်ခြင်း။
၂- လူရှင်းသော လှေကားမှ မတက်ဘဲ လူရှုပ်သောလှေကားမှတက်ခြင်း။
၃- (က) နှင့် (ထ) မခွဲနိုင်တော့ခြင်း။
၄- ကမ်းနား၌ ရေထဲမဆင်းဘဲ သောင်ပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်ခြင်း။
၅- နောက်တစ်နေ့ နေသာထိုင်သာရှိအောင် ညပါတီမှ စောစောအိမ်ပြန်ခြင်း။
- အဘိုးက အမြဲတမ်းအတိတ်မှာ နေနေတယ်။
အဘိုးသည် နားထဲတွင်ထည့်သည့် နားကျပ်ကလေးရသည်ကို သိပ်သဘောကျ၍ ၀ယ်သည့်ဆိုင်သို့ လာရောက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုသည်။
ဆိုင်ထိုင်က - အဘိုးအိမ်သားတွေလည်း ၀မ်းသာမှာပဲနော်- ဟုမေးရာအဘိုးက - အဘိုးနားကျပ်တပ်တာ သူတို့ မသိသေးဘူး၊ သိပ် ဟန်ကျနေတယ်။ အဘိုးသေတမ်းစာပြောင်းရတာ နှစ်ပတ်အတွင်း သုံးခါရှိပြီ။
- အဘိုး ညာဘက်ခြေထောက်နာတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာ။
- မဟုတ်နိုင်ဘူး။ ဒီလိုဆို ဘယ်ဘက်ခြေထောက်က ဘာလို့ မနာတာလဲ၊ သူလဲ အသက်အတူတူပဲ။
အနောက်တိုင်းဟာသ - မှ ကူးယူသည်။
Posted by ဇနိ at 7:29 PM Links to this post0comments
Posted by ဇနိ at 10:22 PM Links to this post0comments
ဟေး ကောင်မငယ်လေး ဘာဖြစ်နေတာလဲ
မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ မနက်ဖြန်အတွက်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မျှင်မျှင်လေးတောင် မတွေ့ရပါလားကွယ်
မင်းသိပ်ဝမ်းနည်းနေတယ်၊ မင်းသိပ်ကိုတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတာ ငါမြင်နေရတယ်လေ။
ဟေး ကောင်မငယ်လေး အမှန်အတိုင်းငါ့ကိုပြောပြပါကွယ်
ငါဟာ မင်းငိုဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးပခုံးတစ်စုံပါ
ငါဟာမင်းအတွက် အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်း၊ မင်းမှီခိုအားထားစရာ လူတစ်ယောက်ပါ
မင်းဟာ မင်းကိုယ်မင်း အမြဲယုံကြည်နေခဲ့တာပါ
ခုတော့ ငါမြင်နေရတယ်၊ မင်းရဲ့ကျိုးပဲ့နေတဲ့ အတောင်မွေးလေးတစ်ခု
ငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အဲဒါလေးကို ပြန်ပြုပြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဟေး ကောင်မငယ်လေး မင်းရောငါရောသိကြပါတယ်ကွယ်
အသည်းနှလုံးဒဏ်ရာတွေဘယ်လိုရလာတယ်ဆိုတာကိုပေါ့၊ သူတို့ထွက်သွားရင်တောင် အမာရွတ်တွေကျန်ခဲ့တယ်မို့လား
နောက်တစ်ကြိမ်လောက်များ မင်းကပြလိုက်စမ်းပါကွယ်၊ နာကျင်မှုတွေပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်
မင်းမှာ ဝမ်းနည်းဖို့ဆိုတဲ့အချိန်လေးတောင် ရှိဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး
ဟေး ကောင်မငယ်လေး မင်းနဲ့ငါငိုနေကြတယ်
ဒါပေမယ့် နေမင်းကြီးကတော့ ကောင်းကင်ထက်မှာတည်နေမြဲ ငါတို့အပေါ်မှာ တောက်ပမြဲပါပဲ
နောက်တစ်ကြိမ်လောက်များ ဟိုးအရင်ကလို သီချင်းလေးတစ်ခါလောက်ဆိုပြလှည့်စမ်းပါကွယ်
ပြီးတော့ မင်းရဲ့အချစ်တွေက ဖယောင်းတိုင်မီးတွေကို ငြိမ်းသတ်ကြလိမ့်မယ်
(ABBA အဖွဲ့၏ “Chiquitita” ကို ခံစားပြန်ဆိုပါသည်။)
Posted by မောင်ဖြူ at 7:02 PM Links to this post0comments
ကျွန်တော်တို့ အသက်-၁၈ နှစ်မပြည့်ရင် စီးကရက်မရောင်းပါဘူး ခင်ဗျာ။ အဲဒါ ဥပဒေပါ၊
ဟေ့ ကလေးမ ယူပါ၊ ယူပါ။ ဒါကတော့ လက်ဆောင်ပေးတာပါ။
အခြားသူတစ်ယောက်၏ မိန်းမအား ယူရန်လွယ်သည်။ ပြန်၍ပေးရန်ကားမဖြစ်နိုင်။
မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အမေးအများဆုံးမေးခွန်းမှာကား - မင်းဘယ်ရောက်နေပြီလဲ။
အများဆုံးအဖြေကား - ရောက်တော့မှာ။
ယင်းပေါ်တွင်အခြေခံ၍ မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီများ ရပ်တည်နေကြသည်။
သူ - ဟေး၊ ငါ စောင့်တောင်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။
သူမ - ကျမကိုထွက်သွားခွင့်ပေးမှာလား။
သူ - စိတ်တောင်မကူးရဘူး။
သူမ - ချစ်ရောချစ်ရဲ့လား။
သူ - သေချာတာပေါ့။
သူမ - နောင်ကျတော့ ရှင်က ကျမအပေါ်မှာ ပြောင်းလဲသွားမှာလား။
သူ - မဟုတ်ရပါဘူး၊ ဘာလို့ ဒါတွေတွေးနေရတာလဲ။
သူမ - အနမ်းတွေရော ပေးမှာလား။
သူ - ပေးမှာပေါ့။
သူမ - စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေရော ပေးမှာလား ဟင်။
သူ - ဘယ်အခြေအနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုးပဲ။
သူမ - ရှင့်ကို ယုံရမှာလား။
မင်္ဂလာဆောင် အပြီး - အောက်ခြေမှ အထက်သို့ အစဉ်လိုက်ဖတ်ပါ။
မိမိရင်သွေးအား နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းသို့ အနည်းဆုံး တစ်ပတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးသင့်ပေသည်။
သို့မှသာ ဧည့်သည်များအား ယင်းကဲ့သို့ မယဉ်ကျေးသော စကားလုံးများ ကလေးက ဘယ်နေရာမှတတ်ခဲ့သည်ဟု ရှင်းပြစရာနည်းလမ်းရပေလိမ့်မည်။
Posted by ဇနိ at 6:27 PM Links to this post 1 comments
Posted by ဇနိ at 2:43 PM Links to this post 1 comments
- ”ထောက်”ခနဲ ပြတ်တောက်သွားပြီ
- မြေအောက်ကို ”ခ”သွားတဲ့ရွက်ဝါလေး
- ဟင်း… ဝေ့ဝဲနေတာလေးကလှတာ
- တွေ့ကြရဲ့လား… အကြောမျှင်လေးတွေ
- ”ချွတ်”ခနဲ နင်းဖြတ်သွားကြပြီ
- ဟေး… ကြားလား……
- အင်း…. သွားပြီလေ…ပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့
- အေးခဲနေတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ပေါ့…။ ။
Posted by မောင်ဖြူ at 12:43 AM Links to this post3comments
အန်နာ မော်စကိုမြို့သို့ သွားဖို့ပြင်ဆင်တယ်။ သူမ တစ်လကို နှစ်ကြိမ် (သို့) သုံးကြိမ် ပီတာစပတ်မြို့ကနေ မော်စကိုမြို့ကို သွားလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီလိုထွက်သွားတိုင်း သူမပေးတဲ့အကြောင်းပြချက်က သူမရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါအတွက် ဆရာဝန်ထံမှ အကြံဥာဏ်တောင်းဖို့လို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကတော့ မယုံတစ်ဝက်ယုံတစ်ဝက်နဲ့ပေါ့။ မော်စကိုမြို့ကိုရောက်တော့ သူမ ဟော်တယ်မှာတည်းခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ချက်ချင်း သူမရောက်ရှိနေကြောင်းကို သိရှိစေရန် အနီရောင် ကက်ဦးထုပ်လေးကို ဂုရော့ဆီကို ပို့လိုက်တယ်။ ဂုရော့ သူမရှိတဲ့နေရာကို သွားလေ့ရှိတာကိုတော့ မော်စကိုမြို့က တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ သတိမထားမိ မသိကြဘူး။ မနေ့က သူမဆီမှ အမှာပါးလိုက်သည့် စကားရရှိခဲ့ပေမယ့် သွားဖို့ရန်အခွင့်အရေးက မရခဲ့ဘူး။ အဲဒါကြောင့် နံနက်ခင်းမှာ သူမဆီကို သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ သူနဲ့အတူ သူ့ရဲ့သမီးပါလိုက်ပါလာတယ်။ သာအဖနှစ်ယေက် လမ်းလျှောက်ထွက်လာရာ လမ်ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်မှတော့ ဆီနှင်းတွေက တောင်ပုံရာပုံဖြစ်လို့နေပြီ။ လမ်းမပေါ်မှာတော့ ဆီးနှင်းတွေအရည်ပျော်နေတဲ့အတွက် ဗွက်ပေါက်လို့နေတယ်။ လမ်းလျှောက်လာရင်း ဂုရော့က…
“ဒီနေ့က အရင်နေ့ကထက်စာရင် သုံးဒီရီလောက်ပိုပူလာတယ်… ဒါပေမယ့် ဒီအတောအတွင်း ဆီးနှင်းကတော့ ကျနေအုံးမှပဲ…မြေကြီးအပေါ်ယံမှာပဲ အဲဒီအပူချိန်ရှိနေတာ… လေထုထဲမှာရှိတဲ့ အပူချိန်ဒီဂရီနဲ့တော့ မတူဘူး…” လို့ပြောတော့……သမီးက
“ဆောင်းရာသီမှာ မိုးချုန်းတာတွေ၊ မိုးကြိုးပစ်တာတွေ ဘာလို့မဖြစ်တာလဲ..”လို့မေးလာတော့… ဂုရော့က အဲဒီအကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ သူကတော့ သူမနဲ့တွေ့ရန်ချိန်းဆိုထားတဲ့နေရာကို သွာဖို့အကြောင်းကိုပဲ စဉ်းစားနေမိတယ်။ သက်ရှိတွေဖြစ်တဲ့ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ဒီအကြောင်းကိုမသိကြဘူး။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတာက နောင်ကိုလည်း ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှ သိကြလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကိုယ်သူ ဘ၀နှစ်မျိုးနှင့် အသက်ရှင်နေရပါ့လားလို့ ထင်နေမိတယ်။ ပထမဘ၀က သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ဘ၀၊ အလားတူ သူ့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ အကောင်းအဆိုး အမှားအမှန်တွေကို သိလည်းသိကြတယ် နားလည်ပေးကြသူတွေလည်းရှိတဲ့ဘ၀၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ဘယ်သူမှမသိအောင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အသိပေးလို့မဖြစ်တဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းလှုပ်ရှားနေရတဲ့ဘ၀။ တစ်စုံတစ်ရာသောအကြောင်းကြောင့်၊ တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးဟာ သူ့အတွက်တော့ အရေးပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ စိတ်ဝင်းစားစရာလည်းကောင်းတယ်၊ မရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ။ မမျှော်လင့်တဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုဆိုပေမယ့် အဲဒီကိစ္စတွေအပေါ်မှာ ရိုးရိုးသားသားရှိခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလှည့်ဖျားခဲ့ဘူး။ အဲဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကပဲ သူ့ရဲ့ဘ၀ကို ဆက်လက်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ အစပျိုးပေးခဲ့တာပါ။ တခြားသူတွေနဲ့ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ ဥပမာ ဘဏ်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ကလပ်ကို အတူသွားလေ့ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ဇနီးနဲ့အတူ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွေတက်ရောက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာ ပွင့်လင်းမှုအပြည့်၊ ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်ရှိသယောင်ပေါ်လွင်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ကြည်နူးနေမိတာကတော့ အမှန်တရားတွေမပေါ်အောင်ဖုံးအုပ်ထားနိုင်တဲ့ လိမ်ညာပြောဆိုနိုင်မှု၊ ကာကွယ်ပြောဆိုနိုင်မှုတွေနဲ့ လှုပ်ရားနေရတဲ့ လျှို့ဝှက်နေရတဲ့ဘ၀မှာပါ။ တစ်ခြားသူတွေရဲ့အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင်အကဲခတ်ကြည့်တယ်။ တစ်ခြားသူတွေရဲ့အမြင်သဘောထားကိုလည်း မယုံကြည်ဘူး။ ပြီးတော့ သူ အမြဲတမ်းထင်မြင်ယူဆနေတာက လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ သူတို့ရဲ့လက်ရှိဘ၀၊ စိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံးဘ၀ကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတယ်။ ဥပမာ အမှောင်ကမ္ဘာထဲမှာ လှုပ်ရှားနေသလိုပေ့ါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေဟာ လျှို့ဝှက်ချက်အနေနဲ့ ရှိနေတာပါ။ ဒါကြောင့် လူကြီးလူကောင်းလို့ထင်ရတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကိုရေးကိုတာလျှို့ဝှက်ချက်တွေ ပေါက်ကြားသွားမှာကို အလွန်စိုးယိမ်ကြောင့်ကြတတ်ကြတယ်။
သမီးဖြစ်သူက အားကစားရုံမှာ နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂုရော့ကတော့ သူမတည်းခိုရာဟော်တယ်ရှိတဲ့နေရာကို ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ ဟော်တယ်ကိုရောက်တော့ သိုးမွေးအင်္ကျီကိုချွတ် ချိတ်မှာချိတ်ကာ သူမရဲ့အခန်းတခါးကို ညင်သာစွာခေါက်လိုက်တယ်။ သူမကတော့ သူအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ကာ မျှော်တလင့်လင့်ရင်မောရင်း မနေ့ညနေကတည်းက ဂုရော့ရောက်လာမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေတာပါ။ တခါးဖွင့်လိုက်တော့ သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ သူမရဲ့မျက်နှာက ဖြူဖတ်ဖြူရော်နဲ့၊ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်လည်းမရှိ။ သူမက ချက်ချင်းသူ့ရင်ခွင်ဆီကိုပြေးဝင်လာတော့ အခန်းထဲကိုမ၀င်ပဲ အတော်ကြာရပ်နေမိတယ်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မတွေ့ဖြစ်ကြတာ နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ။ ဒါကြောင့် အခုလိုပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ သူတို့ရဲ့အနမ်းတွေက ရှည်လျားကြာမြင့်ခဲ့တာပေါ့။
ဂုရော့က “ပီတာစပတ်မှာနေရတာ နေထိုင်ရတာအဆင်ပြေလား…. ဘာသတင်းတွေများ ထူးသေးလဲ…” လို့မေးတော့…
သူမက “ခဏစောင့်ပါအုံး… အဲဒီမေးခွန်းတွေကို အခုမဖြေပရစေနဲ့…”
သူမငိုနေသောကြောင့် စကားမပြောနိုင်။ သူ့ရင်ခွင်ထဲကနေ လှည့်ထွက်ပြီး မျက်ရည်တွေကို သုပ်လို့နေတယ်။ သူကတော့ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ရင်း…
“ငါရှိနေတုန်း သူမငိုပါစေ”လို့ တွေးနေမိတယ်။ အဲဒီနောက် သူ့အတွက် လက်ဖက်ရည်ယူလာဖို့ ဖုန်းဆက်မှာလိုက်တယ်။ လက်ဖက်ရည်သောက်နေခိုက် သူမက ပြတင်းပေါက်ဘက်ကိုလှည့်ကာ ရပ်နေတယ်။ စိုးယိမ်ကြောင့်ကြမှု ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကြောင့် သူမငိုနေတာပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ဟာ ကြေကွဲဖွယ်ရာဘ၀ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့နှစ်ယေက်ဟာ သူခိုးတွေလိုပေါ့ တခြားသူတွေမမြင်အောင် ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုးနဲ့ တိတ်တဆိတ် တွေ့ကြရတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀လေး မပြိုကွဲနိုင်လောက်ပါဘူးလို့လည်း ထင်နေမိတယ်။
“မင်းငိုတာ တော်လောက်ပြီးကွာ… ရပ်ပါတော့” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဟာ မကြာခင်ပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ သူက ထင်ယောင်နေမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်လဲဆိုတာတော့ အတိအကြမသိဘူး။ အန်နာက သူ့ကို အသဲအသန်ု စွဲလန်းနေတာပါ၊ ပြီးတော့ သူထင်ထားတာထက်ကို သူ့ကို ပိုချစ်နေတဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ပတ်သက်ခဲ့တာတွေ ချစ်ခဲ့ကြတာတွေဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကို သူမကိုပြောပြဖို့ သူ့မှာအင်အားမရှိခဲ့ဘူး။ သူမအနေနဲ့က အဲဒီလိုပြောလည်း ယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူး။
သူမအနားကို ချဉ်းကပ်သွားပြီး သူမပုခုံးကိုကိုင်ကာ တစ်စုံတစ်ရာပြောမယ့်ဟန်ပြင်နေတုန်း သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကို မှန်ထဲမှာ မြင်လိုက်မိတယ်။
သူ့ရဲ့ဆံပင်တွေဟာ အရင်ကလို ရွှေအိုရောင်မဟုတ်တော့ တစ်စတစ်စနဲ့ အဖြူရောင်ကိုပြောင်းလဲနေပြီ။ ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ သူဟာ တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာပြီ၊ အရင်ကလို ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသော ရုပ်ရည်လည်းမရှိတောတာသိရတော့ သူ့ကိုယ်သူ အံ့သြနေမိတယ် ၀မ်းနည်းသလို ခံစားနေမိတယ်။ သူလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ပုခုံးအစုံကတော့ ပူနွေးလို့ တုန်ရင်လို့ပေါ့။ သူမလည်းပဲ သူကဲ့သို့ မကြာခင်အချိန်မှာ အလှအပတွေ တဖြည်းဖြည်းပျောက်ဆုံးသွားမှာပဲ။ သူမ ငါ့ကိုဘာကြောင့် စွဲစွဲလန်းလန်းချစ်နေတာလဲ။ သူအနေနဲ့ ဆုံဆည်းခဲ့ဖူးတဲ့မိန်းမတွေကို သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ မကြည့်ခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခဲ့တဲ့သူလည်း မရှိဘူး။ မိန်းမတွေဟာသူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ဖန်တီးကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီယောင်္ကျားနဲ့တူတဲ့သူတစ်ယောက်ကို အငမ်းမရရှာဖွေတတ်ကြတယ်။ တစ်ယောက်အမှားကိုတစ်ယောက် သတိထာမိတဲ့အခါလည်း ဆက်လက်ပြီးချစ်နေကြတယ်။ မိန်းမတွေအများကြီးထဲက ဘယ်သူမှ သူနဲ့အတူ မပျော်ရွှင်ခဲ့ကြဘူး။ အချိန်တွေတာ ကုန်သွားခဲ့တယ် မိန်းမတွေနဲ့ ရင်းနှီးအောင်လုပ်တယ် အတူလျှောက်လည်ကြတယ် ပြီးတော့ လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတာ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ အချစ်ဆိုတာကလွဲလို့ ကျန်တာတွေအားလုံးကို သဘောကျခဲ့တယ်။
အော်…. အခုတော့လည်း ဆံပင်တွေဖြူတော့မှ ဘ၀မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကို တွေ့ရှိခဲ့၊ ခံစားနေမိတယ်။
အန်နာနဲ့ ဂုရော့တို့ နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အိမ်နီးချင်းလိုတစ်မျိုး ရပ်ဆွေရပ်မျိုးလိုတဖုန် ခင်ပွန်းနဲ့ဇနီးလိုတသွယ် အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ အရမ်းကိုချစ်နေကြပြီ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ့် ကံကြမ္မာ ကိုယ့်ဖာသာ ဖမ်းတီးမယ်လို့ ခံယူထာကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်များ တစ်ခြားသူတွေကို လက်ထပ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ တာလဲဆိုတာကိုတော့ နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အမြင်သာဆုံးဥပမာနဲ့ပြောရရင် တသီးတခြားဆီဖြစ်နေတဲ့လှောင်အိမ်ထဲမှာ အဖမ်းခံထားရတဲ့ ငှက်ဖို ငှက်မ လိုပေါ့….
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကို ရှက်မနေတော့ပဲ ခွင့်လွတ်ခဲ့ကြသလို အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုလည်း နားလည်ပေးနိုင်လာတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဟာ နှစ်ယောက်လုံးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တာကိုတော့ သူတို့နှစ်ဦးသတိထားမိလာတယ်။ သူမနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ချိန်အစောပိုင်းမှာတော့ သူက ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိသမျှ စကားလုံးတွေကို အေးအေးဆေးဆေးပဲ ပြောနေမိတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ သူ့အနေနဲ့ စကားမပြောချင်တော့ဘူး၊ မဆွေးနွေးချင်တော့ဘူး။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ သံယောဇဉ်ကို ပိုပြီးနူးညံ့စေချင်လာတယ်။ ပိုပြီးခိုင်မြဲစေချင်လာတယ်…
“မငိုပါနဲ့တော့ကွာ… ဒီလောက်ဆို အငိုရပ်သင့်ပြီ… ငါတို့ တစ်ခုခုစဉ်းစားကြရအောင်…” လို့ သူကပြောလိုက်တယ်။
အဲဒီနောက် အချိန်တော်တော်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုးနေရတာတွေ၊ သူများကိုလိမ်ညာရတာတွေ၊ တစ်မြို့တစ်နယ်စီမှာနေရတာတွေ၊ အချိန်အကြာကြီးမတွေ့ဘဲနေရတာတွေ ကလွတ်မြှောက်ဖို့ အဖြေကိုရှာခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေ ဘယ်လိုရုန်းထွက်မလဲ။
“ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ….ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…” ဦးခေါင်းကိုကုပ်လျက် ဂုရော့စဉ်းစားနေမိတယ်။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာမှာတော့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လာတယ်။ အဲဒီနောက် လှပသော ဘ၀အသစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်နေပြီ။ နှစ်ယောက်စလုံး နားလည်သဘောပေါက်လက်ခံလာတာကတော့…
“ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တွေ ပြီးဆုံးဖို့ဆိုတာ ဝေးသတဲ့ဝေးလို့ နေပါပြီ၊ ပြီတော့ အခုအချိန်ကစပြီး အလွန်ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ပြောပြဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေကို စတင်ဖန်တီးမိနေကြပြီ”
စာဖတ်သူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
Posted by tmn at 6:22 AM Links to this post0comments
မိန်းမပျိုကလေးတစ်ယောက်သည် နံနက်ခင်း ငါးနာရီခန့်တွင် ကပွဲအပြီး ဈေးဆိုင်တစ်ခုထဲသို့ဝင်ကာ သူမ၏အမေဆီကို ဖုန်းဆက်သည်။
- မေမေ၊ တစ်ခုခုဝယ်ခဲ့ရမလား။
-အေး၊ ကိုယ်ဟာကို တိုက်ခန်းဝယ်ပြီး သီးသန့်သာနေတော့။
စားသောက်ဆိုင်ထဲသို့ မိသားစုတစ်စု( မေမေ၊ဖေဖေ၊သား) ၀င်လာသည်။ စားကြ၊သောက်ကြ ပြီးသောအခါ ပိုက်ဆံရှင်းလေသည်။
မေမေ - ၀ိတ်တာ! စားထားတာကျန်တာတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး ထုပ်ပြီးပေးပါ။ အိမ်မှာ ခွေးရှိလို့။
သား - မေမေ၊ အိမ်မှာ ခွေးမွေးမလို့လား။
Posted by ဇနိ at 12:31 AM Links to this post0comments
ရုရှားဟာသတစ်ချို့ကို ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ ပြုံးရယ်နိုင်ကြပါစေ။
- ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတို့ လျှပ်စစ်ဘယ်ကနေ ရသလဲ သိကြသလား။
- ကျွန်တော်သိတယ်။ တောအုပ်ထဲက။
- မင်းကဘာလို့ အဲဒီလိုထင်တာလဲ။
- ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ အဖေမုတ်ဆိတ်မွေးရိတ်ခါနီး ပြောတယ်
- အဖေ ကျွန်တော့်ကို ပိုက်ဆံတစ်ရာလောက်ပေးပါဦး။
- သား၊ မင်းအရွယ်က ဒီလောက်အသေးအမွှားကို အဖေဆီမှာတောင်းရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးကွ။
- အဖေမှန်တယ်။ တစ်ထောင်ပေး။
-ဒေါက်တာ၊ ကျွန်တော် စိတ်ကျရောဂါရှိနေလို့။
- အကောင်းဆုံးဆေးကတော့ - အလုပ်ထဲမှာ ခေါင်းနှစ်ထားဖို့ပဲ။
- ဒေါက်တာ၊ ကျွန်တော်က ကွန်ကရစ်ဖျော်တဲ့သူပါ။
- အမေရိကန်နိုင်ငံလုပ် စွမ်းအားပြင်း ဓာတုဗေဒလက်နက်ကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
- ဘောက်ဆင်ထိုးတယ်ဆိုတာ အတော်ကြီးကျယ်တဲ့ အားကစားဗျ။ ကျွန်တော်အဲဒါနဲ့လုပ်စားတာ။
- ခင်ဗျားက နာမည်ကြီးဘောက်ဆင်သမား ထင်တယ်နော်။
- ဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်က သွားဆရာဝန်။
ဆရာ - ကလေးတို့ အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုများ ဥပမာပေးနိုင်မလား။
ကျောင်းသား - ကျွန်တော့် အဖေနဲ့ အမေရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်က တစ်ခုတည်းပြီးတော့ တစ်ရက်တည်း။
- လူစိမ်းတစ်ယောက်က မင်းရဲ့ မိထွေးကို ရိုက်နေတာကို ဘာဖြစ်လို့ အကူအညီ ပေးဖို့အလျင်တလိုမလုပ်တာလဲ။
- ဘာ။ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ကျုပ်မိထွေးကိုရိုက်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။
မိန်းမ - ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။
လူနာ - သွားနှစ်ချောင်းနှုတ်ခဲ့လို့။
မိန်းမ - နောက်တစ်ချောင်းထပ်နာလို့လား။
လူနာ - ဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဆီမှာ ပိုက်ဆံပြန်အမ်းစရာမရှိလို့။
Posted by ဇနိ at 8:11 PM Links to this post 1 comments
Posted by ဇနိ at 1:27 AM Links to this post0comments
Posted by tmn at 11:03 PM Links to this post0comments
(အနမ်းတွေမပါဝင်တော့တာတော့ ကိုယ့်အိပ်မက်ရဲ့ ကံဆိုးမှုတစ်ခုပေါ့)
Posted by မောင်ဖြူ at 10:24 PM Links to this post0comments
“ဟေး တစ်ခါတုန်းက စံပယ်ကုံး”။
ဒီစာသားတွေကလဲ သူ့ကို ကိုယ်စားမပြုဘူး။
သိချင်ရင် တာရာမင်းဝေရဲ့ “အာလာဒင်မသိလိုက်တဲ့မီးခွက်”က စာမျက်နှာ (၃၇)ကိုဖတ်။
Posted by မောင်ဖြူ at 2:06 PM Links to this post 1 comments
မြန်မာပြန် - ကိုလုံး
မိတ်ဆွေဖြစ်ကြသည်မှာ ရက်သတ္တပတ်ခန့်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အပန်းဖြေရက်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းကုန်လွန်ခဲ့လေပြီ….ရာသီဥတုကပူတော့ အခန်းထဲမှာလည်း ပူစပ်ပူလောင်၊ အပြင်မှာတော့ လေပူ၊ လေပွေတိုက်ခတ်နေလေသည်။ ဦးတည်ရာမဲ့ တိုက်ခတ်နေသောလေများနဲ့အတူ ဖုံမှုန့်တွေပါလာသည်။ တစ်နေ့လုံး ရေကိုပဲ သောက်ချင်နေတော့သည်။ တခြားနေရာများကို လျှောက်သွားလိုစိတ်လည်းမရှိ။ ဂုရော့ တဲလေးရှိရာသို့ တစ်ခါတစ်ရံသာ ရောက်ပြီး၊ အန်နာကို သီးစုံဖျော်ရည်သောက်ရန်၊ ရေခဲ့မုန့် စားရန် ဖိတ်ခေါ်လေ့ရှိသည်။ ညနေပိုင်းသို့ရောက်သောအခါ ရာသီဥတုသာယာလာသဖြင့် နှစ်ရောက်အတူ သင်္ဘောဆိပ်ခံတံတားရှိရာသို့ လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု လူအုပ်ကိုတွေ့ရပြီး တစ်ချို့မှာတော့ လက်ထဲတွင် ပန်းစည်းကိုကိုင်လျက် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ခရီးကြိုဆိုရန် စောင့်နေကြသည်။ လူအုပ်ကြီးထဲတွင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များလို ၀တ်ဆင်ထားသော အသက်ကြီးကြီးမိန်မတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို မြင်တွေ့ရသည်။
နေ၀င်ပြီးအနည်းငယ်အကြာမှာ သင်္ဘောဆိုက်ကပ်လာလေသည်။ အန်နာက သင်္ဘောရှိရာနေရာနှင့် ခရီးသည်များကို မှန်ဘီလူးဖြင့် တလှည့်စီကြည့်နေသည်။ သူမရဲ့ မျက်ဝန်းအစုံမှာလည်း တောက်ပလို့နေသည်။ သူမစကားတွေအများကြီးပြောပြီး၊ မေးလိုက်သောမေးခွန်းများကလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိ တုံးတိတိ၊ ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေမေးမိမှန်းလည်း သူမ မမှတ်မိ၊ ပြီးတော့ မှန်ဘီလူးကိုလည်း တစ်နေနေရာမှာ ကျပျောက်ခဲ့ပြန်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆိပ်ကမ်းတွင် လူများမရှိတော့၊ လေပြည်လေညင်းတို့ ငြိမ်သက်နေ၍ ကမ်းခြေတွင် တိတ်ဆိတ်နေသည်။ သင်္ဘောမှ တစ်စုံတစ်ယောက်များထွက်လာဦးမလားဆိုပြီး စောင့်ဆိုင်းရင်း အန်နာနဲ့ ဂုရော့ အချိန်တော်တော်ကြာရပ်နေသည်။ အန်နာကတော့ နှုတ်ဆိတ်လျက်၊ ပြီးတော့ လက်ထဲက ပန်းစည်းလေးကို နမ်းရှိုက်နေသည်။
“ရာသီဥတုက ညနေပိုင်းရောက်လေ သာယာလေပဲနော်…တို့ အခုဘယ်နေရာကို သွားကြမလဲ… တစ်နေရာရာကိုသွားဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလား”လို့မေးတော့…သူမက မေးခွန်းတစ်ခုကိုမှ ပြန်မဖြေခဲ့။
အဲဒီနောက် သူက အန်နာကို အသေအချာစိုက်ကြည့်လျက် သူမအား ရုတ်တရက်ပွေ့ဖက်ကာ သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းလိုက်၏။ သူ၏တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ပန်းတို့ရဲ့ရနံ့တို့ဖြင့် လွမ်းခြုံသလိုခံစားသွားရသည်။ ထို့နောက် သူ ဒီလိုပြုမူလိုက်တာကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကများ မြင်သွားမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်မိသည်။
“မင်းဆီကို အလည်လာလို့ရမလား….”လို့ သူက အန်နာကို တိုးတိုးလေးမေးလိုက်ပါတယ်။
ထို့နောက် နှစ်ယောက်အတူ ခတ်မြန်မြန်လျှောက်ကာ ဟော်တယ်သို့ ပြန်ခဲ့ကြလေသည်။ သူမရဲ့အခန်းထဲမှာ အသက်ရှုကျပ်သလို ဂုရော့ခံစားရတယ်၊ ဂျပန်စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်က ၀ယ်လာတဲ့ ရေမွှေးရနံ့လေးက သင်းလို့နေတယ်။ ဂုရော့ သူမကိုမကြည့်ပဲ စဉ်းစားနေမိတာက
“သူရဲ့ဘ၀မှာ ဒီလိုအမျိုးသမီးနဲ့ မတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်း…. ပြီးတော့ လွန်ခဲ့သောအတိတ်က တခဏတာတွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ ဘာကိုမှဂရုမစိုက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်သော အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း၊ စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းသော အမျိုသမီးတွေအကြောင်း၊ အချစ်ရှိမှ ပျော်တတ်သောအမျိုးသမီးတွေအကြောင်း၊ သူက ရီစရာဟာသတွေပြောတဲ့အခါ ချီးမွမ်းတတ်သော အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း … ဥပမာပြောရရင် သူ့ရဲ့အတိတ်က ဇနီးတွေအကြောင်းပေါ့… အဲဒီလိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ရတိုင်း သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှ အမုန်းစိတ်များသာတိုးပွားလာပြီး သူတို့ရဲ့အ၀တ်အစားတွေဟာလည်း တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ အကြေးခွံနဲ့တူတယ်လို့ ခံစားနေရတယ်… အန်နာကတော့ အဲဒီ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူ ရှက်တတ်တယ်၊ အတွေ့အကြုံကလည်းနု၊ သူမကိုကြည့်ရတာ သူနဲ့ဆုံတိုင်း အနေအထိုင်မလွတ်လပ်တဲ့ပုံစံနဲ့၊ သူမရဲ့အပြုအမူတွေကလည်း ပြာရာခတ်နေတယ်… အန်နာ “ခွေးကလေးတစ်ကောင်နဲ့ အမျိုးသမီး”ရေ မင်းရဲ့အတိတ်က ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ ထူးဆန်းပြီး မင်းရဲ့ဘ၀ကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်အောင် စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိခဲ့လို့လား…”
သူမကတော့ စိတ်ဓာတ်ကျနေသောပုံစံနဲ့၊ ဆံပင်တွေကလည်း ဖရိုဖရဲနဲ့ မျက်နှာတစ်ဖက်ခြမ်းကိုအုပ်လို့နေတယ်။ သူမကိုယ်သူမ အပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်ထားသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်လို့ ခံစားနေမိတယ်။ ရုတ်တရက် သူမက
“ကျွန်တော့်ကို လူကြီးလူကောင်းအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုပဲ ပြောဆိုဆက်ဆံတာ ခင်ဗျားက ပထမဆုံးပဲ… အဲဒါမကောင်းဘူးဗျာ… ” လို့ပြောလိုက်တယ်။
ဂုရော့ကတော့ စားပွဲပေါ်က ဖရဲသီးကိုတစ်စိတ်ချင်းလှီးပြီး အေးအေးဆေးဆေးစားနေတယ်။ တစ်ယေက်နဲ့တစ်ယေက် စကားမပြောကြပဲ တိတ်ဆိတ်လို့နေတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာထွန်းထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကတော့ မီးရောင်တောက်ပလို့နေတယ်။ သူမရဲ့မျက်နှာမှာ ပြုံးလို့နေလား… သူမ ၀မ်းနည်းနေလား ၀မ်းသာနေလားဆိုတာကိုလည်း သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရ။ သူမက ရိုးသားတယ်၊ အလွယ်တကူ စိတ်ထိခိုက်တတ်တယ်။
“မင်းအပေါ်မှာ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်လို မပြောဆို မဆက်ဆံဘူးလို့ ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲ။ မင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကို မင်းကိုယ်တိုင်နားလည်ရဲ့လား”လို့မေးတော့… သူမက
“ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်ကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ” ပြန်ပြောရင်း သူမရဲ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေအပြည့်လို့နေတယ်။ တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းပလားနော်လို့ ရေရွတ်ရင်း သူမက
“ရှင် ကျွန်မကို အပြစ်မမြင်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်နော်”လို့မေးလိုက်တော့….သူက
“ငါက ဘာကိုအပြစ်မြင်ရမှာလဲ…”လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်။ သူမက
“ကျွန်မက အသုံးမကျတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ မိန်းမတစ်ယေက်ပါ… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အထင်မကြီး မလေးစား၊ သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးဖို့လည်း မစဉ်းစားမိဘူး… ကျွန်မရဲ့ ခင်ပွန်းအပေါ်မှာ မလိမ်ညာခဲ့ဘူး၊ မလှည့်ဖျားခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ လိမ်ညာလှည့်ဖျားခဲ့တယ်။ အခုမဟုတ်ပါဘူး… ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ညာတာ တော်တော်ကြာနေပြီ။ ကျွန်မခင်ပွန်းက ရိုးသာတဲ့ လူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရှင်သိရဲ့လား သူက အစေခံယောင်္ကျားတစ်ယောက်ပါ။ အခုတော့ သူဘာတွေလုပ်နေလဲ မသိဘူး။ ကျွန်မသိတာကတော့ သူက အစေခံယောင်္ကျားတစ်ယေက်လို အလုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာကိုပဲ သိတယ်။ သူနဲ့ လက်ထပ်တော့ ကျွန်မရဲ့အသက်က နှစ်ဆယ်ပဲရှိသေးတယ်။ သူကို ကျွန်မ မချစ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မက အခုလက်ရှိထက် သာလွန်တဲ့ဘ၀ကို တမ်းတခဲ့တာပါ။ အချစ်က ကျွန်မရဲ့ဘ၀ကို ပူလောင်စေခဲ့တယ်… ရှင် ဒါကိုရော နားလည်ရဲ့လား…ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျိမ်စာကြောင့်ထင်တယ် ကျွန်မ ကိုယ့်စိတ်ကို မထိန်းနိုင်ခဲ့ပဲ၊ တစ်ခုခုကို မစဉ်းစားပဲ လုပ်ခဲ့မိတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်မကို ဆက်လက်မပေါင်းသင်းတော့ဖို့ ခင်ပွန်းကို ပြောလိုက်မိတာပါပဲ။ အဲဒီနောက် ကျွန်မ နာကျင်စွာခံစားခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့ စိတ်ညစ်တာနဲ့ အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ အခုတော့ ဒီကမ်းခြေမှာ လေလွင့်သူတစ်ယောက်လို၊ အရူးတစ်ယောက်လို ကျွန်မ လျှောက်သွားနေတာပဲလေ။ ဟောအခု ကျွန်မက ရိုင်းစိုင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မိန်မတစ်ယေက် ဖြစ်နေပြီ။ လူတွေအားလုံးကလည်း ကျွန်မကို အထင်သေး၊ အမြင်သေးနဲ့ ကြည့်နေကြပြီ….”
ဂုရော့ သူမရဲ့စကားတွေကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ နားထောင်နေမိတယ်။ မျှော်လင့်မထားသောစကားလုံးတွေ၊ မပြောသင့်သောစကားလုံးတွေနဲ့ ပြောပြသော သူမရဲ့စကားတွေကြောင့် သူစိတ်ထဲမှာ အတော်တုန်လှုပ်ခဲ့ရတယ်။ တကယ်လို့ သူမရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာ မျက်ရည်စတွေရှိမနေဘူးဆိုရင် သူမက ဟာသတစ်ပုဒ်ကို ပြောပြနေတာလား၊ ဒါမမဟုတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကို သရုပ်ဆောင်ပြနေတာလား လို့ထင်လောက်စရာပါ။
“ငါနားမလည်ဘူး…မင်း ဘာကိုလိုချင်တာလဲ” လို့ ဂုရော့ကပြောတော့….
သူမက သူ့ရင်ခွင်ဆီကိုတိုးဝင်လားပြီး သူ့ကိုဖက်ထားရင်း…
”ကျွန်မကို ရိုက်ပါ… ကျွန်မက ရိုးသားတဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ဘ၀ကို နှစ်သက်တယ်… အခုတော့ ကျွန်မက မရိုးသားတဲ့ လိမ်ညာတတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ… ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မ မသိတော့ဘူး။ တစ်ချို့ကတော့ ပြောကြတယ် ကျွန်မရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ မကောင်းဘူးတဲ့။ ကျွန်မ မကောင်းတာတွေကို လုပ်ခဲ့မိတဲ့အကြာင်း ရှင့်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ အခုတော့ ပြောပြနိုင်ပြီ…”
“တော်ပါတော့ကွာ…တော်ပါတော့”လို့ ဂုရော့ တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်။
သူမကို မရွေ့လျားပဲ စူးရှတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်ရင်း ညင်သာစွာ နှုတ်ခမ်းတို့ကို နမ်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူမလည်း စိတ်ညစ်တာတွေပျောက်ကာ ပြန်လည်ပျော်ရွှင်လာသလို ခံစားလာရတယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား စကားပြောရင်း အားရပါးရ ရယ်မောနေခဲ့ကြသည်။
သူတို့ အခန်းထဲကနေ အပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြသည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်မှာတော့ မွန်းကြပ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ အသက်ရှူကြပ်တာတွေ မရှိတော့ဘူး။ မြို့ကလည်း လှပတဲ့သစ်ပင်၊ ပန်းပင်တွေနဲ့အတူ တိတ်ဆိတ်လို့နေတယ်။ ပင်လယ်ပြင်မှာတော့ ရေလှိုင်းရိုက်သံတွေနဲ့ ဆူညံလို့နေတယ်။ ကမ်းခြေကို ရိုက်ခတ်လာသော ရေလှိုင်းပုတ်သံကိုလည်း ကြားနေရတယ်။ နီယွန်မီး ခတ်မှိုန်မှိုန်ထွန်းထားသော မော်တော်ဘုတ်တစ်စီးကတော့ ရေလှိုင်းတွေအလယ်မှာ ဘယ်ညာယိမ်းလို့နေတယ်။ မြင်းလှည်းတစ်စီးကိုတွေ့တော့ တားပြီး ဟော်တယ်”အော်ဒီအန်ဒါ” ဆီသို့ သွားကြတယ်။ “အောက်ထပ်ကအ၀င်ဝက ဘုတ်မှာ မင်းရဲ့ မိဘမျိုးရိုးအမည်ကို ငါအခုလေးတင် ဖတ်ခဲ့တာ… မင်းရဲ့ခင်ပွန်းက ဂျာမန်လူမျိုးတစ်ယေက်လား…” လို့ မေးတော့…. သူမက
“မဟုတ်ပါဘူး… သူ့ရဲ့အဖေကတော့ ဂျာမန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်… သူကတော့ ခရစ်ယန်တစ်ယောက်ပါ…” လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
ဟော်တယ် ”အော်ဒီအန်ဒါ” ကိုရောက်တော့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ ခုံရှည်မှာထိုင်ရင်း ပင်လယ်ပြင်ရှိရာဘက်ကို ငေးမောကြည့်ရင်း စကားမပြောပဲ အတွေးကိုယ်စီနဲ့တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြတယ်။ ရာလ်သာမြို့လေးမှာတော့ နံနက်ခင်းမြူ တွေနဲ့ ဖုန်းအုပ်လို့နေတယ်။ တောင်တန်းတွေဆီမှာတော့ လှပတဲ့အဖြူရောင်တိမ်တိုက်တွေက မလှုပ်မရှား ငြိမ်လို့နေတယ်။ သစ်ပင်တွေမှ သစ်ရွက်တွေကလည်း မလှုပ်မရှား၊ ပုဇင်းရင်ကွဲကောင်လေးရဲ့ ဆူဆူညံညံအော်သံနဲ့ ပင်လယ်ဘက်က ရေလှိုင်းပုတ်သံတွေဟာ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အကြောင်း၊ ညနေခင်းတစ်ခုရဲ့ အိပ်မက်တွေအကြောင်တွေကို ပြောပြနေတယ်။ ရာလ်သာဆိုတဲ့ မြို့လေးမရှိခင်၊ ”အော်ဒီအန်ဒါ” ဟော်တယ် မရှိခင်ကတည်းက ပင်လယ်ကြီးကရှိနေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့တတွေ မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာလည်း ပင်လယ်ကြီးကတော့ ရေလှိုင်းရိုက်သံတွေနဲ့ ဆူညံလို့နေအုံးမှာပါ။ ဒီလို နံနက်မိုးသောက်ယံအချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့နံဘေးမှာ လှပတဲ့အမျိုးသမီးရှိနေတာဟာ ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်လဲ။ ပင်လယ်ကြီးရယ်၊ တောင်တန်းတွေရယ်၊ လှပတဲ့မိုးတိမ်တွေရယ်၊ ရှည်လျားကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးရယ် စသဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ နတ်သမီးပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်နေရသလိုပဲ။ ဒီလိုမျှော်လင့်မထားတဲ့ အလှအပတွေဟာ နက်နဲသိမ်မွေ့မှု၊ ဆန်းကြယ်မှုတို့ကို ဖော်ကျူးနေသလိုပေါ့။
သူတို့အနီးသို့ ဟော်တယ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ယောင်လည်လည်နဲ့ သူတို့ကိုကြည့်ကာ ပြန်ထွက်သွားတယ်။ ပင်လယ်ပြင်မှာလည်း နံနက်ခင်းနေရောင်ခြည်တွေ လင်းလက်လာသလိုပဲ။ သင်္ဘော၊ မော်တော်ဘုတ်တွေက မီးမထွန်းပဲ ကမ်းခြေဆီကို ဆိုက်ကပ်နေကြပြီ။
ဘယ်လောက်ကြာကြာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယေက် စကားမပြောမိကြသည် သတိမထားမိ။ အန်နာ က
“မြက်ခင်းပေါ်မှာ နှင်းပေါက်လေးတွေရှိနေပြီ” လို့ပြောတော့… ဂုရော့ က
”ဟုတ်တယ်….ဒို့ အိမ်ပြန်ဖို့ အချိန်တန်ပြီ” …
အဲဒီနောက် နှစ်ယောက်အတူ မြို့ထဲသို့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
နောက်နေ့တွေမှာတော့ နေ့လည်ခင်းတိုင်းလိုလို သူတို့နှစ်ယေက် ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ တွေ့ဖြစ်ကြတယ်။ နှစ်ယေက်မတူ နံနက်စာ စားတယ်။ နေ့လည်စာ စားတယ်။ လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ သူမက ညဘက်တွေမှာ အိပ်မပျော်တာ၊ အိပ်ရေးပျက်ရင် နှလုံးခုန်တာကို အန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောနေတယ်။ သူမအပေါ်မှာ လေးလေးစားစား ပြောဆိုဆက်မှုမရှိမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေပုံရတယ်။ မေးပြီးသားမေးခွန်းများကို ထပ်တလဲလဲ မေးနေပြန်တယ်။ သူတို့ ပန်းခြံထဲက ခုံတန်းတွေမှာထိုင်ခဲ့ရင်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယေက် နီးနီးကပ်ကပ် ဘယ်တော့မှ မထိုင်ခဲ့ဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ သူက သူမကို ရုတ်တရက်ဆွဲဖက်ကာ ထူးဆန်တဲ့အနမ်းတွေပေးတတ်တယ်။ အဲဒီလိုနမ်းပြီးတိုင်း တစ်စုံတစ်ယောက်များ မြင်သွာမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ရတာကလည်းအမောပါပဲ။ သူက အန်နာကို မင်းက ကောင်းမွန်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၊ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတယ်၊ စိတ်ရှည်တယ်၊ သည်းခံတတ်တယ်… အဲဒါကြောင့် မင်းရဲ့အပါးက တစ်ဖ၀ါးမှမခွာချင်ဘူးလို့ပြောသော်လည်း….သူမဘက်ကတော့ သူ့ကို လေးလေးစားစားဆက်ဆံမှုမရှိသူ၊ သူမကို လုံးဝမချစ်တဲ့သူ၊ သူမကို အရိုင်းအစိုင်းမိန်းမတစ်ယောက်လို သဘောထားတဲ့သူ အဖြစ် စိတ်ထဲမှာထင်ယောင်နေမိပါတယ်။ မြို့ထဲဘက်၊ ဟော်တယ်ဘက်နဲ့ ရေတံခွန်ရှိရာကို သူတို့နှစ်ယောက် ညနေတိုင်းလိုလို သွားဖြစ်ကြတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက် နှစ်ယောက်အတူ လမ်းလျှောက်ရတာက နေ့ရက်တွေကတော့ အပျော်ရွှင်ဆုံး၊ ကြည်နူးစရာအကောင်းဆုံး နေရက်တွေပါပဲ။ သူမက တော့ ခင်ပွန်းရောက်လာမဲ့နေ့ကို မျှော်လင့်စောင့်စားရင်း ရက်တွေတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ကုန်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ သူ့ခင်ပွန်းဆီက စာတစ်ဆောင် ရောက်လာတယ်။ စာထဲမှာ မျက်စိနာနေလို့ အိမ်ကိုအမြန်ပြန်ခဲ့ဖို့အကြောင်းရေးထားတော့ သူမ အတော်ပျာယာခတ်သွားတယ်။
“ကျွန်မ အိမ်ကို ပြန်မှဖြစ်မယ်…ဒါဟာ ကံတရားရဲ့ စီမံမှုပဲ…”လို့သူမက ပြောလိုက်တယ်။
ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးတဲ့နောက် သူမကို ဘူတာကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။ သူမ ရထားထဲမှာ ထိုင်နေရင်း ရထားထွက်ဖို့ ဒုတိယအချက်ပေးသံကိုကြားရတော့… သူမက
“ရှင်ကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တွေ့ခွင့်ပေးပါနော်” လို့ပြောလိုက်တယ်။
သူမ မငိုပါဘူး… ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းနေတယ်… သေချာတာကတော့ နာကျင်စွာခံစားနေရတယ်…သူမရဲ့မျက်နှာမှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အမူအရာပေါ်လွင်နေတယ်။
“ကျွန်မ ရှင်ရဲ့အကြောင်းကို စဉ်းစားနေမှာပါ၊ သတိရနေမှာပါ၊ ရှင့်ကို ဘုရားသခင် စောင့်ရှောက်ပါစေ…မကောင်းဆိုးရွားတွေနဲ့ မတွေ့ပါစေနဲ့…တို့တစ်တွေက အမြဲတန်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နှုတ်ဆက်နေရမှာ…အဲဒါက တကယ်ကိုလိုအပ်တယ်လေ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ တို့တစ်တွေက လုံးဝဆုံဆည်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လို့ပဲ… ဒါပါပဲ… ရှင့်ကို ဘုရားသခင် စောင့်ရှောက်ပါစေ…”လို့ပြောနေချိန်မှာ ရထားက စတင်ထွက်ခွာနေပါပြီ။
ရထားကြီးလျှက်မြန်စွာထွက်သွားပြီး မကြာခင်မှာပဲ ရထားစက်ခေါင်းမှ မီးခိုးများလည်း တဖြည်းဖြည်းကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ပြီ။ ဆူညံသံများလည်း မရှိတော့။ လူသွားစင်္ကြန်မှာ တစ်ယောက်ထဲရပ်နေရင်း ဟိုးအဝေးတစ်နေရာကို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့စကာသံတွေ၊ ကြေးနန်းကြိုးတွေမှ ထွက်လာသော တ၀ီဝီအသံတွေကြောင့် သူသတိပြန်ဝင်လာတယ်။ သူမနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဂုရော့ သတိရနေမိတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးဟာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ သူ့အတွက်တော့ သတိရခြင်းတွေ လွမ်ဆွတ်ခြင်းတွေ သာ ကျန်ရစ်နေခဲ့တယ်။ သူကတော့ ၀မ်းနည်းစွာ နောင်တတရားတွေတပွေ့တပိုက်နဲ့ အရူးတစ်ယောက်လို ခံစားနေရတယ်။ ဒီလို ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ဆုံဖို့ သူဘ၀မှာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ သူမကတော့ သူနဲ့တွေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်မှုမရှိသလိုပဲ။ သူမအတွက်ဆိုရင် မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်လိုနေထိုင်ခဲ့တယ်။ သူမနဲ့စကားပြောတဲ့အခါတိုင်း ရင်ခုန်သလို ခံစားရတယ်။ သူမထက် အသက်နှစ်ဆခန့်ကြီးသူဆိုတော့ သူ့ရဲ့စကားတွေ၊ ကြင်နာမှုတွေက သူမအပေါ်လှောင်ပြောင်သလိုများ ဖြစ်နေခဲ့လား။ အချိန်တိုင်းလိုလို သူမကတော့ သူ့ကို ကြင်နာတတ်တဲ့သူ၊ သာမန်သူတွေထက်ထူးတဲ့သူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာပါ။ သူဘက်ကတော့ သူမလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမရှိခဲ့ဘူး။ သူမအပေါ်မှာ သတိလက်လွတ် လိမ်ညာခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်….
ဘူတာရုံမှာတော့ ဆောင်းဦးပေါက်ရနံ့တွေ သင်းပျန့်လို့နေတယ်။ ညနေပိုင်းရောက်ရင် ရာသီဥတုက ပိုပြီးအေးလာတယ်။ မြောက်အရပ်ကိုပြန်ဖို့ အချိန်တန်ပြီးလို့တွေးရင်း လူသွားစင်္ကြန်ကနေ ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။
Posted by tmn at 2:33 AM Links to this post2comments